Qupzilla - qt5 ရှိပေါ့ပါးပြီး cross-platform browser Linux မှ
Qupzilla: ပေါ့ပါးပြီး cross-platform browser
အိုင်ဗင် | | applications များ
Qupzilla ရှိပြီးသားတဲ့ browser ကိုဖြစ်ပါတယ် အများကြီးဒီဘလော့ဂ်ပေါ်မှာဆိုပါတယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်အလွန်ပေါ့ပါးပြီးပလက်ဖောင်းပေါ်နှင့် GTK + ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် KDE သို့မဟုတ် LXQt နှစ်ခုလုံးတွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်။
၎င်း၏ Windows နှင့် OS X နှင့်ပေါင်းစည်းမှုသည်အလွန်ကောင်းသည်။
အရောင်ဒေတာတစ်ခုအနေဖြင့် Qupzilla တွင် OS /2နှင့် Haiku အတွက်ဗားရှင်းများလည်းရှိသည်ဟုဆိုပါ။
ဤအချက်အလက်များကို Gentoo မှရရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်အခြားကွန်ရက်စာမျက်နှာများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်တွင်ကွဲပြားနိုင်သည်။
Chrome ကတော့ဒီနှိုင်းယှဉ်ချက်ကိုမထည့်ပါဘူး ကန ဦး စားသုံးမှု Firefox နှင့်ဆင်တူသည်စားသုံးပါ တစ်ခုချင်းစီကိုဖွင့် tab ကိုအဘို့အများကြီးပို (40MB န်းကျင်) ။
ထို့အပြင် Qupzilla တစ်စီးရီးရှိပါတယ် ဇာတ်ကောင် အလွန်အသုံးဝင်, သူတို့ထဲကအတော်များများဆန်းသစ်:
ပေါင်းစည်းထားသော်လည်း (deactivatable) AdBlock ကြော်ငြာကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်သင်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
၎င်းသည် Phising ကိုကာကွယ်ရန်အသုံးဝင်သော domain name ကိုပြသသည် (ဥပမာ - တစ်စုံတစ်ယောက်သည် dsdelinux ဟုခေါ်သောစာမျက်နှာတစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးစကားဝှက်များကိုခိုးယူရန်အသုံးပြုသည်) ။ သင်၏ IP ကိုကွင်းကွင်း၌လည်းပြသပြီးသင်က Whois မထင်မှတ်လျှင်အသုံးဝင်နိုင်သည်။
Bookmarks, History နှင့် RSS များကိုအတူတူ ၀ င်းဒိုးတွင်ပေါင်းစပ်ပါ။
Hover tab previews (rekonq ကဲ့သို့)
၎င်းတွင် Classic Speed ​​Dial ရှိသည်။
Desktop ပေါ်တွင်မူလပေါင်းစည်းခြင်း (ပုံများကိုဤစာမူ၏အစတွင်ကြည့်ပါ) ။
၎င်းသည် Flash application များကိုပိတ်ဆို့ပြီး၎င်းတို့ကို load လုပ်ရန် (စားသုံးမှုကိုလျှော့ချရန်) ခလုတ်ဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။ ဒီနည်းပညာကို Click to Flash လို့ခေါ်တယ်။
ဘက်ပေါင်းစုံအသုံးပြုသူအေးဂျင့်အယ်ဒီတာ။ ခွင့်ပြုထားသည် အသုံးပြုသူအေးဂျင့်ကိုပြောင်းလဲပစ် လွယ်ကူပါတယ်။ အချို့စာမျက်နှာများအတွက် user agent ကိုသတ်မှတ်ရန်လည်းခွင့်ပြုသည် (ဥပမာအားဖြင့်ငါ Chrome user agent နှင့် Gmail သို့ log) ။
မူလသတိပေးချက်ပေါင်းစည်းခြင်း (kde နှင့်လည်း)
ထောက်ပံ့ အဆိုပါသူကပြောတယ် ကွမ်းခြံကုန်း
Autoscroll အထောက်အပံ့ (ဗဟိုခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်စာမျက်နှာကို cursor ဖြင့် scroll နိုင်သည်)
သုံးစွဲမှုအချက်အလက်များကို google.es စာမျက်နှာဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ပုံမှန်စာမျက်နှာတွင် Qupzilla သုံးစွဲမှု 16 MB အထိကျဆင်းသွားသည်Firefox ရှိနေစဉ် 160 MB မှာတည်ရှိပါတယ်s.
ဒီဘလော့ဂ်ရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာ Qupzilla ၆၃ MB သာသုံးစွဲသည် Firefox ရှိနေစဉ် 160 MB အထိစားသုံးနိုင်သေးတယ်။
QtWebServer (QtWebkit နေရာတွင်အစားထိုး) အဆင်သင့်ဖြစ်လျှင် Qupzilla သည် Blink သို့ပြောင်းလိမ့်မည်။
Qupzilla ကို install လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ ၎င်းသည်အဓိကဖြန့်ဝေမှုအားလုံးနီးပါး၏ repositories တွင်ရှိသည်။ သင့်အားကူညီရန်လူကြိုက်များသော distros အချို့တွင်တပ်ဆင်မှု command များရှိသည်။
Debian / Ubuntu / Mint နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ:
sudo apt-get ထည့်သွင်းပါ qupzilla
sudo pacman -S qupzilla ဖြစ်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Qupzilla: ပေါ့ပါးပြီး cross-platform browser
40 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Carlos Felipe Pessoa de Araújo ဟုသူကပြောသည်
Mac OS X နှင့် Ubuntu တွင်၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပါမည်။
ကျွန်ုပ်သည် Kwallet နှင့်အခြား linux သော့ချိတ်များကိုလည်းမုန်းပါသည်။
Carlos Felipe Pessoa de Araújoအားပြန်ပြောပါ
ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကဒီကြီးကျယ်တဲ့ browser အတွက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့တယ် https://blog.desdelinux.net/qupzilla-el-navegador-que-te-esta-esperando/
အခုငါ Rekonq ကိုသုံးနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်မကြာခင်ငါကူပဇီလာကိုပြန်လာမယ် ...
Juan Quispe ဟုသူကပြောသည်
ငါ Qupzilla ကိုသုံးသည်၊ သို့သော်အခြား browser များလည်းသုံးရမည်။ အချို့သောစာမျက်နှာများသည် flash နှင့်အဆင်မပြေပါ၊ ဂျီမေးလ်တွင်ဓါတ်ပုံများကိုဖွင့ ်၍ မရပါ (သို့မဟုတ် linux.net မှ) ။
Juan Quispe အားပြန်ပြောပါ
သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်စေတယ်၊ ​​ငါပုံတွေကအရမ်းကိုပစ်ထားတာကိုတွေ့ရပေမဲ့၊ အဲဒါတွေကပျော့ပြောင်းစေတယ်၊ ​​စိတ်ကူးမရှိဘူးလား။
ဒီနှင့် DWB အကြားစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သယံဇာတသုံးစွဲမှုသည်မည်မျှကွာခြားကြောင်းသိပါသလား။
KaOS ကိုကျွန်တော် install လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Qupzilla ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့သူကကျွန်တော့်ကိုမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ firefox နဲ့ chromium တို့မပေါ်ခဲ့တဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုဖွင့်ဖို့အချိန်များစွာယူခဲ့ပါတယ်။
Naah, ဘာမှ Links ကို hahaha ထက်သာ။ ကောင်း၏
ငါ Lynx Hehe ကိုပိုကြိုက်ပါတယ်
ငါ qupzilla ရဲ့ပရိတ်သတ်ပါ။ ၎င်းသည်မြန်ဆန်။ အလင်း၊ လျင်မြန်စွာတင်ထားသောစာမျက်နှာများ၊ gem: D. ကျွန်ုပ်လိုချင်သည်မှာအသုံးပြုသူကိုယ်စားလှယ်ကိုတည်းဖြတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ distro ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ google home page (အနက်ရောင်ထိပ်ဘား) အဟောင်းကိုမပြနိုင်စေရန်ဖြစ်သည်။
၎င်းကို Edit> Preferences> Others> User Agent Manager တွင်ပြုလုပ်သည်
သင်စာမျက်နှာပေါ် မူတည်၍ သင်လိုချင်သော user agent ကိုတောင်ထည့်နိုင်သည်။ အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ဒီမှာကိုယ့်ကိုယ်ကို qupzilla နှင့် google မှာ chrome အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
သင်မှန်တယ်၊ အခြားပို့စ်တစ်ခုမှာစမ်းသပ်မှုအချို့လုပ်ပြီးသည်နှင့် (ကျွန်ုပ် spam မဟုတ်ပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ မဖယ်ရှားပါနှင့်) user agent ကို Aninngos 32 bit နဲ့ Cinnamon နှင့်တွဲသုံးသည် fixed
ကောင်းပြီသင်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါငါကငါကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်မူလတန်း OS ကိုစမ်းသပ်နေပြီး၎င်းသည်ကောင်းစွာသွားနေပြီ၊ Midori ထက် ပို၍ နှစ်သက်သည်။
ဘရောင်ဇာသည်အရင်းအမြစ်များစားသုံးမှု (သို့) အနိမ့်ဆုံးစက်များကိုဂရုပြုသူများအတွက်အတော်လေးအသုံးဝင်သည်။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေသည်။ ဒါဟာတန်ဖိုးထားသည်။
ကျွန်တော်နားမလည်တဲ့အရာတစ်ခုခုရှိပေမယ့် Kwallet ကိုဘာလို့မုန်းရတာလဲ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အတော်လေးအသုံး ၀ င်ပုံရပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာကိုရှာမတွေ့နိုင်ပါ (KDE အတွက်တည်ရှိပါက) ။
အခြေခံအားဖြင့်လူအများအပြားကစကားဝှက်ရေးသွင်းတဲ့ခလုတ်တွေကိုမုန်းတဲ့အတွက်အဲဒါဟာလူသိအများဆုံးပါပဲ။ စုစုပေါင်းကဒါကဟာသပဲ။ ထို့အပြင် kwallet သည်အလွန်လေးလံသည် (pedantic) ဖြစ်သည်။
သေချာတာပေါ့၊ ကျွန်တော်တွေ့နိုင်တာတစ်ခုကပိုက်ဆံအိတ် (ဥပမာ၊ ကျွန်တော် log in လုပ်တဲ့အချိန်မှာ) ဖွင့်ဖို့ပြောတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာစကားဝှက်တစ်ခုတောင်းခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါချွတ်လိုက်ပြီးပြproblemsနာမရှိဘူး။
ubuntu [seahorse] တွင် keystore ကိုသုံးသကဲ့သို့မိုက်မဲသည်။
ps: root နှင့် bank: derp ကဲ့သို့စကားဝှက်ကိုမသုံးပါနှင့်
ကောင်းတယ် ၀ င်းဒိုးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည့်အခါ (Chromium တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အတိုင်း) browser များသည်ကျွန်ုပ်အားလှည့်စားမပေးနိုင်ပါ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်က).
Wow, မှားယွင်းသောလက္ခဏာအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင်သူတို့က XD ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်ကြသည်။
ငါအဲဒါကို install လုပ်ပြီးသားပါ။ 🙂
ဒါဟာငါရှာနိုင်လတ်ဆတ်သည်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်းသင်၏ပြောဆိုချက်သည်မမှန်ပါ။ နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ် asm.js. ဖြစ်ပါတယ် သို့သော်၎င်းသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာထောက်ခံမှုမရှိပါက၎င်းသည်စိတ်ပျက်ဖွယ်နှိုင်းယှဉ်ချက်ဖြစ်သည်။ စကားမစပ် firefox သည် LLVM ကို JIT အနေနှင့်အသုံးပြုသင့်သည်။
သို့သော်သင်ကျန်ခဲ့သည့် link တွင် firefox သည် suspider တွင်အနိုင်ရရှိသည်
ခရုမ်း: 147.2 ms
Firefox: ၁၃၉.၉ ms
အော်ပရာ: 158.2 ms
သို့သော် Sunspider သည် Mozilla ထိန်းသိမ်းထားသောစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည် ...
အဲဒါ ... ? အလေးအနက်ထား? သို့သော်၎င်းသည် webkit စာမျက်နှာရှိလျှင် ... mozilla နှင့် webkit သည်အတူတူဝါကျတွင် xD နှင့်မကိုက်ညီပါ။ mozilla ကိုထိန်းသိမ်းထားသူမှာ kraken ဖြစ်သည်
အကယ်၍ ၎င်းကို mozilla ဖြင့်အမှန်တကယ်ထိန်းသိမ်းထားပါက octane (ဂူဂဲလ်မှထိန်းသိမ်းထားသော) ထက် ပို၍ ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။
မကြာခဏဆိုသလို၎င်းကိုစနစ်နှင့်ကောင်းမွန်စွာပေါင်းသင်းနိုင်သည့်အနည်းငယ်သော browser များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်လေးလံမှုမရှိသည့်အပြင်စာမျက်နှာများကိုကောင်းမွန်စွာအနက်ဖွင့်သောကြောင့် OpenSUSE (ကျွန်ုပ်၏အဓိက browser သည် Firefox) တွင်အခါအားလျော်စွာအသုံးပြုပါသည်။
မြန်ဆန်ပြီးသင်ပြောသည့်အတိုင်း၊ system အသုံးပြုသောစတိုင်နှင့်ကိုက်ညီသောကြောင့် graphical integration သည်အလွန်ကောင်းသည် (ကျွန်ုပ်သည် QTCurve ကို KDE ရှိ Flat theme နှင့်အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး browser ပေါ်ရှိအခြားစနစ်တစ်ခုကဲ့သို့ပြုမူသည်) ။
ကျွန်တော့်အတွက်တော့ပေါ့ပါးတဲ့ Browser က Opera၊ Midori ပေါ့။ Opera တွင် DuckDuckGo ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုထည့်ပြီး၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းစက်သည် ၃၂ bits ထဲ၌ 1MB RAM သာရှိပြီးအဟောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
opera သည် google docs extension မရှိဘဲ chrome ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်လိမ့်မည်
ငါအရမ်းမြန်မြန်နှင့်အဖွဲ့များ poooooooooooobres အတွက်ကောင်းစွာ run ရန်သူ၏စွမ်းရည်ကိုလက်လွတ်
ယခုတွင်၎င်းတွင် bug များစွာရှိသည်။ ၎င်း၏အဓိကတစ်ခုမှာစာမျက်နှာ၏အမှားသည်းခံနိုင်မှုသည်အလွန်ဆိုးပြီးဆိုးဆိုးရွားရွားကုဒ်ထားသောဆိုဒ်များက၎င်းကိုပျက်ကွက်စေသည်။
ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့ရသည့်ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်လိုချင်သော desktop အတွက်တစ်ခုတည်းသောအကောင်းဆုံး browser များမှာ Chromium သို့မဟုတ် Chrome (QT မဟုတ်) နှင့်အကောင်းဆုံးကိုပေါင်းစပ်ထားသော Rekonq နှင့် Qupzilla (QT)၊ Firefox နှင့် Opera Plasma တွင်ပေါင်းစည်းလိုက်သောနာကျင်မှုကကျွန်ုပ်အတွက်ဖြစ်သည်။ GTK applications များနှင့်သဟဇာတဖြစ်စေရန် packages များဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းကိုငြီးငွေ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
ကျွန်ုပ်တွင်အရင်းအမြစ်များစွာရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စက်သည်ပြtheနာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာမှာကျွန်ုပ်သည် ATI HD4000 ကိုအသုံးပြုသောဂရပ်ဖစ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် OpenGL အစိတ်အပိုင်း (၂ မှ ၃) တိုင်းပျောက်နေသည် (ပြောစရာမလိုပါ။ Radeon driver သည်၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုအလွန်ကောင်းသည်။ ဒါပေမယ့်ဒါပေမယ့်သူကလူသိများတဲ့အရာရှိတစ်ယောက်က xD ကိုဘာတွေပေးမယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ပါဘူး။ ငါ menubar widget နဲ့ bar ကို Dock လိုသုံးတယ်။ ပေါင်းစည်းမှုပြwithနာနဲ့ငါကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါကြောင့်ငါ Qupzilla ကိုအချိန်အတော်ကြာအသုံးပြုနေတယ်။
နောက်ဆုံးတွင် Qupzilla ကိုရွေးချယ်ပြီး KDE နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပေါင်းစပ်မှုသို့မဟုတ် Mozilla Foundation ၏အတွေးအခေါ်ကို ဆက်၍ ဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမည့်အထိနောက်ဆုံးတွင် Qupzilla ကိုရွေးချယ်ပြီးစွန့်ပစ်ရန်ကျွန်ုပ်စဉ်းစားခဲ့သည်။
၎င်းသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အရသာနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည်
PS: Firefox ၏ "Lite" ဗားရှင်းတော်တော်များများ (အနည်းဆုံးGüindow $ အတွက်) ရှိသည်။ Midori ငါက၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာ၊ အလင်း၊ မြန်ပြီးလှပသည်။ အနည်းဆုံး Elementary-Panteon / Wingpanel မျက်နှာပြင်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည် ။
သတင်းရင်းမြစ်တွေက Firefox ထက်အရည်အသွေးပိုကောင်းတာကိုပြတယ် မင်းအဲဒီလိုမဖြစ်ဘူးလား
၎င်းသည် windows များ၌စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသည်၊ linux တွင်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ အမှန်တကယ်တွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်၎င်းတွင် extensions များစွာမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အနည်းငယ်လွတ်သွားသည်။
Firefox ကို ၄ င်းကို linux ရှိဒုတိယဘရောက်ဇာတစ်ခုအနေဖြင့်ငါ ပို၍ နှစ်သက်သည်
အမှန်တရားကတော့ Chrome ကိုကျွန်တော်သုံးနေတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့်သူကအရမ်းမြန်လွန်းတယ်။
ငါ qupzilla ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကပြတင်းပေါက်များ၌စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး၎င်းကိုစုပ်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ် install လုပ်ပြီးသည်နှင့်အနည်းဆုံး (ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောစာမျက်နှာပေါ်တွင်) chrome ထက် ပို၍ ပျံသန်းသည်။ ၎င်းသည်စင်ကြယ်သောတပ်ဆင်မှုကြောင့်မဟုတ်ပါ၊ မင်းတို့ခြားနားချက်ကိုပြောနိုင်တယ် .. မင်းမှာရှိတဲ့နောက် version ကို install လုပ်ပြီးငါ့ကိုတော်တော်များများပျက်စီးစေတယ်၊ ​​ငါတည်ငြိမ်လာခဲ့တယ်။
ငါကဒါ beta ကိုမဟုတျကွောငျးအတည်ပြု, ဒါကြောင့်လည်းငါ့ကိုတည်ငြိမ်နှင့်အတူပျက်သွား .. ကငါ့ကိုတစ်မိနစ်သာပိတ်, ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာစိတ်ကူး?
AION တို့ဖြစ်တယ် ဟုသူကပြောသည်
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ကောင်းမွန်ပြီးကောင်းမွန်သည်ဟုထင်ရသည်၊ သို့သော် Flash Player လိုအပ်သည့်ဗီဒီယိုများတွင်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။
lubuntu 14.04 တွင် crash ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ မျက်နှာပြင်ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေပါသည်
obedlink ပါ ဟုသူကပြောသည်
မည်သူမဆို kubuntu တွင် Qt5 ဗားရှင်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
ကျွန်တော် xupuntu ကို qupzilla ကိုစမ်းကြည့်လိုက်တာနဲ့ firefox ထက် RAM memory ကိုပိုသုံးတယ်၊ tabs အနည်းငယ်ကိုဖွင့်လိုက်တိုင်းပြိုကျသွားတယ်။ Tabs ၃ ခုဖွင့်ထားသည့်အခါ ၄၀၀mbmb ပတ်ပတ်လည်ကိုအသုံးပြုသည်။ firefox သည် 3-400mb ram ရှိသည်။ ငါကဒီတိုးတက်မှုရှိမရှိကြည့်ဖို့ Midori ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
UMLet: Linux ပေါ်မှာ UML မော်ဒယ်လ်